Global Voices teny Malagasy » Shina: Mahatsiaro an’i Hu Yaobang ny praiminisitra Wen · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Avrily 2019 3:06 GMT 1	 · Mpanoratra Don Weinland Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Tamin'ny taratasy misokatra nivoaka ny Alakamisy tao amin'ny People’s Daily , nampahatsiahy ny dia nahafinaritra niaraka tamin'ny praiminisitra teo aloha Hu Yaobang nogadraina sy nalàna baraka ny praiminisitra Shinoa Wen Jiabao. Mahatsiaro ny faha-21 taona nahafatesany ilay taratasy.
Nahazo valiny mahatalanjona avy amin'ny vahoaka ny taratasy nalefan'i Wen. Nitatira ny New York Times  fa efa 20,000 mahery ny valin-teny ao amin'ny aterineto tao anatin'ny andro namoahana azy.
Manambara ny maha-zava-dehibe ilay taratasy tao amin'ny Shina ankehitriny ilay bilaogera Yao Keming  .
Ao anatin'ny ambaratongan'ny governemanta Shinoa sy ny biraon'ny antoko, matetika raisina ho mpitarika tokana mifandray amin'ny olon-tsotra i Wen. Ho setrin'ny taratasiny, naneho izany fahatsapana izany ilay bilaogera mitondra ny anarana hoe ‘Freedom ’.
Mandray ny hafatra nalefa tao amin'ny taratasin'i Wen ilay bilaogera Mo Ce .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/05/136730/
 People’s Daily: http://fashion.people.com.cn/GB/11374407.html
 New York Times: http://www.nytimes.com/2010/04/16/world/asia/16china.html
 Yao Keming: http://www.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=4902478
 Mo Ce: http://blog.hljradio.com/blog.php?do=showone&type=blog&cid=109&itemid=8573